यसरी झन् खतरनाक भएर आउँदैछ कोरोनाको तेस्रो लहर, बालबच्चालाई कसरी जोगाउने ? – नेपाली संगसार
पत्रपत्रिकाबाट calendar_today ४ जेष्ठ २०७८, 4:02 am
काठमाडौं । कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) संक्रमणको तेस्रो लहर छिट्टै आउन सक्ने भन्दै अहिले नै तयारी थाल्न विज्ञहरुले जोड दिएका छन् ।
खोप नलगाएका व्यक्ति र बालबालिका तेस्रो लहरबाट बढी प्रभावित हुने विज्ञको विश्लेषण रहेको छ ।
कान्ति बाल अस्पतालका निर्देशक एवं वरिष्ठ बालरोग विशेषज्ञ डा. आरपी बिच्छाका अनुसार छिमेकी मुलुक भारतलगायत विश्वभरकै तथ्यांक हेर्दा अक्टोबर, नोभेम्बर महिनामा कोभिडको तेस्रो लहर आउने निश्चितप्रायः रहेको छ ।
‘पहिलो लहरमा बूढापाका र दोस्रो लहरमा युवा बढी प्रभावित भएजस्तै तेस्रो लहरले बालबालिका बढी जोखिममा पर्ने अनुमान छ,’ बिच्छाले भनेका छन् ।
कोभिडको पहिलो लहरमा संक्रमितमध्ये बालबालिका २ प्रतिशतभन्दा कम रहेका थिए । हालको दोस्रो लहरमा कूल संक्रमितमा बालबालिकाको हिस्सा करीब १० प्रतिशत रहेको छ ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयका सहप्रवक्ता डा. समीरकुमार अधिकारीले समेत कोभिडको तेस्रो लहर आउन सक्ने र यसले बालबालिकालगायत खोप नलगाएकाहरु बढी जोखिममा पर्नसक्ने बताएका छन् ।
दोस्रो लहर कम भएर सामान्यतर्फ जान थालेपछि स्कूल खुल्ने भएकाले संक्रमणको समस्या निम्तिने डा. अधिकारीको भनाइ रहेको छ । ‘राजनीतिक, सामाजिक र आर्थिकलगायत सबै क्षेत्रले संयम तोडेर दोस्रो लहर ल्याउन सघाए,’ डा. अधिकारीले भने, ‘तेस्रो लहर चाँडै फैलिन्छ, अत्यन्त जोखिमपूर्ण स्थिति आउनसक्छ ।’
बालबालिकाका लागि खोप समेत नभएकाले स्वास्थ्यमा जनशक्तिलगायत पूर्वाधार व्यवस्था तत्काल गर्नुपर्नेमा डा. अधिकारीले बताएका छन् ।
कोरोना भाइरसले सहजै रुप परिवर्तन गरिरहेकाले तेस्रो लहरमा बालबालिकालाई तीब्रगतिमा समस्यामा पार्ने डा. बिच्छाको अनुमान रहेको छ । ‘हालसम्म बच्चाका लागि कुनै खोप छैन । अमेरिकामा फाइजरको खोप १२–१५ वर्ष उमेरसम्मका लागि सुरू भयो तर त्यो तत्काल यहाँ आउने सम्भावना देखिँदैन । बच्चाको खोप छिट्टै नआउने भएकाले तेस्रो लहरमा सर्वाधिक पीडित हुने आकलन हो ।’
भारतमा बायोटेकको कोभ्याक्सिन खोप २–१८ वर्ष उमेर समूहमा ‘क्लिनिकल ट्रायल’ चलिरहेको छ । ड्रग्स कन्ट्रोलर जनरल अफ इन्डिया (डीसीजीआई) ले २–१८ वर्षसम्मको उमेर समूहमा कोभ्याक्सिनको दोस्रो र तेस्रो चरणको क्लीनिकल ट्रायलको मञ्जुरी दिइसकेको छ ।
बालबालिकाका लागि सुरक्षित र प्रभावकारी खोपको क्लीनिकल ट्रायलमा नेपाल सहभागी हुन सके बेलैमा खोप आउन सक्ने विज्ञहरु बताउँछन् । बालबालिकाको खोप परीक्षणको परिणाम आउनमा सेप्टेम्बर, अक्टोबरसम्म लाग्न सक्ने डा. बिच्छाले बताएका छन् ।
‘बच्चामा संक्रमणको विस्तार रोक्न अबको समय अत्याधिक उपयोग गर्नुपर्छ,’ डा. बिच्छाले भने ।
सीमावर्ती भारतीय राज्य उत्तर प्रदेशका मुख्यमन्त्री योगी आदित्यनाथले कोभिडको तेस्रो लहरसँग जुध्ने तयारी सुरू गरिसकेका छन् । ‘तस्रो लहरको निसानामा बालबालिका पर्ने भएकाले त्यसैमा केन्द्रित भएर प्रदेश सरकारले तयारी थालेको छ,’ मुख्यमन्त्री आदित्यनाथका मिडिया सल्लाहकार मृत्युञ्जय कुमारले भने, ‘उत्तर प्रदेशका सबै ७५ जिल्लामा बालबालिकाका लागि आईसीयू तयार गर्न निर्देशन दिइएको छ ।’
प्रत्येक जिल्ला अस्पतालमा १० शय्या तथा मेडिकल कलेजमा कम्तीमा २५ शय्या पेडियाट्रिक (बाल चिकित्सा) आईसीयू बनाउने काम सुरू भइसकेको मृत्युञ्जयले बताएका छन् । विशेषज्ञहरुले कोभिडको पहिलो लहर कम भएकै बेला दोस्रो लहर आउनसक्ने चेतावनी दिए पनि सरकारले तयारी नगर्दा अहिले बढी क्षति पुगिरहेको इपिडिमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाका पूर्व निर्देशक डा. जीडी ठाकुरले बताएका छन् ।
‘सरकारले त्यस्तो गल्ती अब दोहोर्‍याउनु हुँदैन । समयमै तयारी गरेर तेस्रो लहरमा बढी क्षति हुन नदिऔं,’ ठाकुरले भनेका छन् ।
डा. बिच्छाले बालबालिका संक्रमित हुने मुख्य सम्भावित स्थल घर, समुदाय र स्कूल रहेका बताएका छन् । ‘सम्भावित संक्रमण रोक्न कडा पाइला चाल्नुपर्छ,’ बिच्छाले भने । विज्ञहरुका अनुसार बालबालिकाको छेउछाउमा रहने सबै व्यक्तिलाई कोभिड विरुद्घको खोप सुनिश्चित गरे संक्रमणबाट जोगाउन सकिन्छ । बालबालिकालाई संक्रमण वयस्कबाटै सर्नेछ । ‘बच्चाका लागि खोप नभएकाले उनीहरुको वरिपरि रहने सबैलाई खोप दिएर सुरक्षित राख्न सकिन्छ,’ डा. बिच्छाले भने, ‘४०–६० प्रतिशत नागरिकलाई कोभिड विरुद्घको खोप दिन सके बालबालिकाका लागि जोखिम धेरै कम हुन्छ ।’
तर अक्टोबरसम्ममा मुलुकका ६० प्रतिशत नागरिकलाई २ मात्रा खोप दिइसक्ने सम्भावना देखिएको छैन । डा. बिच्छाले ४ महिनाभित्रमा ७ वटै प्रदेशमा हाई डिपेन्डेन्सी युनिट (एचडीयू), आईसीयूलगायत भएको न्यूनतम २०० बेडको अस्पताल तयार गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।
‘बच्चामा इम्युनिटी पावर उसै कम हुन्छ । अहिलेदेखि नै तयारी गरेनौं भने तेस्रो लहर आए सम्हाल्न सक्दैनौं,’ बिच्छाले भने । जिल्लास्तरमा समेत बालबालिकाको स्वास्थ्योपचार सहज हुनसक्ने पूर्वाधार तयार गर्नुपर्ने उनले बताए । विद्यालयले भौतिक उपस्थितिको सट्टा भर्चुअल (अनलाइन) उपस्थितिमा कक्षा सञ्चालनलाई निरन्तरता दिनुपर्नेमा बिच्छाले जोड दिएका छन् ।
‘तेस्रो लहर डिसेम्बरसम्म जानसक्छ । त्यतिबेलासम्म स्कूल खोल्दा जोखिम हुनसक्छ,’ डा. बिच्छाले भने ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयका सहप्रवक्ता डा. अधिकारीले समेत तेस्रो लहर आउनुअघि नै बहुसंख्यक नागरिकमा खोप लगाउने व्यवस्था गर्नुका साथै संक्रमण रोकथाम, नियन्त्रण र उपचारका लागि पूर्वाधार व्यवस्थापन गर्न जरुरी रहेको बताएका छन् । आजको कान्तिपुर दैनिकमा समाचार प्रकाशित छ ।